मकवानपुर थाहा नगरपालिकामा वि.सं. २०५३ सालबाट शुभारम्भ भएको स्नातक तहको पढाई संचालन गर्नका लागि पालुङ बहुमुखी क्याम्पसलाई वि.सं. २०६५ सालबाट त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन प्राप्त ग¥यो । एकदशक बढि मकवानपुर बहुमुखी क्याम्पसको विस्तारित कार्यक्रमको रुपमा रहेको यो क्याम्पसमा अहिले स्थानीय विद्यार्थीहरुको आकर्षण पनि बढ्दै गएको छ । घरको कामकाज भ्याएर स्नातक पढ्न पाइने र गुस्तरीय नतिजा हासिल गरिरहेको भएर पनि यस क्याम्पसमा विद्यार्थीहरको झुकाव बढेको हो । प्रस्तुत छ, यसै सन्दर्भका पालुङ बहुमुखी क्याम्पस संचालक समितिका अध्यक्ष विष्णु विष्ट ‘आदर्श’संग थाहा टाइम्स डट.कम. गरेको कुराकानीः
आफ्ना बालबालिकालाई पालुङ बहुमुखी क्याम्पसमा नै किन पढाउने ?
– पालुङ बहुमुखी क्याम्पस तपाई हाम्रो सबैको साझा क्याम्पस हो । यो कुरालाई हामी थाहा नगरबासीले सम्झनु बुझ्नु पर्छ । हाम्रा बालबालिकाले घरछेवैको स्कुलबाट जसरी कखरा.. सिक्छन् तिनको उच्च शिक्षा हासिल पनि गाउँघरमै गराउने उद्देश्यले पालुङ बहुमुखी क्याम्पस संचालन भएको हो । विद्यालय शिक्षा हासिल गरी बसेका बालबालिकालाई उच्च शिक्षासंग जोड्ने पुल भनेकै पालुङ क्याम्पस रहेको हो । घरैको खाना खाएर कम खर्चमा उच्च शिक्षा हासिल गर्न सकिने भएकोले पनि यस क्याम्पसको मर्म अनुसार यहाँ आफ्ना बालबालिकालाई भर्ना गर्नका लागि आग्रह गर्दछु ।
पालुङ क्याम्पसमा नि शैक्षिक गुणस्तर राम्रो हुन्न भन्छन् नि ?
– गुणस्तरी शिक्षाका लागि पालु्ङ क्याम्पस हरतरहले लागि परेको छ । र, त्यो पनि स्पष्ट पार्न चाहान्छु पालुङ क्याम्पस गुणस्तरसहितको उच्च शिक्षा हासिल गर्ने शैक्षिक थलो हो । यहाँका प्राध्यापकहरु गुणस्तरीय शिक्षणका लागि सँधै प्रतिवद्ध छन् । हामी व्यवस्थापकीय युनिट पनि गुणस्तरीय शिक्षण सिकाइका लागि कुनै ‘कम्परमाइज’ गर्दैनौ । उदाहरण थुप्रै हेर्न सक्नुहुन्छ । यहाँ पढेका विद्यार्थीहरु प्रोफेसर भएकाछन्, ठूला वित्तिय संसथाका प्रबन्धकहरु भएका छन् । यहाँ अध्ययन गरेका विद्यार्थीहरु धेरै ठाउँमा प्रतिस्पधाबाट छनोट भई रोजगरमा छन्् । त्यसैले यस क्याम्पसको शिक्षा गुणस्तरीय छ भन्नेमा आम अभिभावक तथा विद्यार्थीहरुलाई जानकारी गराउन चाहान्छु ।
यहाँ कुन–कुन विषय पढ्न पाइन्छ ?
– पालुङ बहुमुखी क्याम्पसमा व्यवस्थापन र मानवीकी संकाय अध्यापन हुन्छ । यहाँ ऐच्छिक विषय अंग्रेजी, समाजशास्त्र, नेपाली र अर्थशास्त्र अध्ययन गर्न सकिन्छ ।
यी विषय बढ्न त जागिर खाँदै अन्यत्र पनि पाइन्छ नि ?
– मैले अघि पनि भने,–‘यो तपाई हामी सबैको साँझा शैक्षिक धरोहर हो ।’ यहाँका अधिकांश मानिसहरु खेतीपातीमै संलग्न छन् । विद्यार्थी उमेरका व्यक्तिहरु पनि पढाईको अलवा परिवारको कृषि पेशालाई सहयोग गरिरहेका हुन्छन् । त्यसकारण पनि घरको कृषि कर्म गर्दै यहाँ उच्च शिक्षा अध्ययन गर्न सहजता छ । यस कारण पनि म यहाँ अध्ययनका लागि आव्हान गर्दछु । आफ्नो परिवारसंगै रहेर घरको काम गरेर अध्ययन गर्न पाउने शैक्षिक संस्था भनेको यहि हो । हुनत काठमाण्डौं लगायतका अन्य शहरमा रोजगारी सहित अध्ययन गर्न पाइएला तर यहाँको जस्तो पारिवारिक वातावरण पाईदैन । तसर्थ, घरैमा स्वरोजगार हुँदै घरछेवैमा रहेको पालुङ क्याम्पसमा अध्ययन गर्न पाइने भएकोले अन्यत्र भन्दा निकै फरकपन महशुस गर्न सकिन्छ ।
पालुङ क्याम्पसमा आकर्षण किन कमी आएको होला ?
– यो बुझाइमा कमजोर भयो होला भन्ने लाग्दछ । पालुङ क्याम्पसप्रति आकर्षण नभएको होइन की क्याम्पसले आफ्ना सेवा र गुणस्तरीयताको सवाल बाहिर लैजान नसकेको भन्ने लाग्छ । अब तपाइहरु जस्तो संचार माध्यमले यि कुराहरुलाई उजागर गरिदिनु प¥यो । पालुङ बहुमुखी क्याम्पसको पहिलो कुरा त सेवा क्षेत्र नै कम छ । नगरमा जम्मा ५ वटा उच्च मावि रहेका छन् । यि मध्ये सुन्दरीदेवी माविको प्राविधिक धार बाहेक अन्य विद्यालयबाट उतीर्ण विद्यार्थीहरु नै पालुङ बहुमसखी क्याम्पसको स्रोत विद्यालय हुन् । उतीर्ण विद्यार्थीहरु मध्ये कतिपयलाई उनीहरुले छनोट गरेको विषय नभएका कारण पालुङ क्याम्पसमा आउन सकेका छैनन् । केही क्याम्पसको गुणस्तरीयतालाई बुझ्न नसकेर पनि बाहिरिएका छन् । त्यसैले क्याम्पसप्रति नै आकर्षण नभएको भने भन्न मिल्ने अवस्था छैन । बरु, हामी थप आकर्षका कार्यक्रमहरु पनि अघि सारिरहेका छौं ।
थप आकर्षणका कार्यक्रम भन्नाले कस्तो ?
– हाम्रो धरातल पहाडी छ । थोरै दुरी पार गर्न पनि पुर्वाधार विकासको अभावले असहज छ । विद्यार्थीहरु भौगोलिक विकता र सार्वजनिक यातायातको सहज पहुँच अभावका कारण क्याम्पसमा आउन सकिरहेका छैनन् । क्याम्पस र विद्यार्थीबीचको दुरी छोट्याउन अर्थात सजिलै क्याम्पससम्म आइपुग्नको लागि हामी बसको व्यवस्था गर्दैछौं । थाहा नगरपालिकाको चित्लाङ–बज्रवाराही क्षेत्रबाट बस लगाउने र विद्यार्थीहरुलाई सहजै क्याम्पससम्म आइपुग्ने वातावरण बनाउने छु । यहि शैक्षिक सत्रबाट बस संचालनको लागि थाहा नगरपालिका र जनकल्याण माविसंग क्याम्पसले आवश्यक सहकार्य गरिरहेको जानकारी गराउँछु । त्यस्तै बुहारीहरुको लागि मासिक शुल्कमा छुट दिने व्यवस्था गरेको छु । छात्रवृत्तिलगायतका अन्य कार्यक्रमहरु पनि राखेको छु ।
नयाँ भर्ना हुने विद्यार्थीको लागि फरकपन के छ ?
– हामी उच्च शिक्षा हासिल गर्ने सम्पुर्णलाई पालुङ क्याम्पसमा स्वागत गर्न चाहान्छौ । उहाँहरुको शिक्षाको विषयमा जहिल्यै चिन्तित हुन्छौं । शैक्षिक गुणस्तरको लागि हामी जहिल्यै प्रतिवद्ध हुन्छौं । उत्कृष्ट अंक ल्याई यस क्याम्पसमा भर्ना हुन आउने विद्यार्थीलाई हामीले विशेष छुटको व्यवस्था गरेका छौं । र, अन्तमा भन्न चाहान्छु घरछेवैको क्याम्पसमा अध्ययन गरी गुणस्तरीय शिक्षा हासिलका लागि म पालुङ बहुमुखी क्याम्पसमा भर्ना हुनको लागि सम्पूर्णमा हार्दिक अनुरोध गर्दछु ।